Ii-FAQs -I-Quanzhou New Hunter Bags & Luggages Co, Ltd.
Singumzi mveliso onemigca ethe nca pls! Sineendawo zethu zokuthengisa! Kule meko, sinokusebenza ngokufanelekileyo ngokuthe ngqo ngaphandle kokungaqondi kubathengi bethu.
Ewe kunjalo .
Ukuba ufuna isampuli kwasekuqaleni esinayo kwinkampani yethu, inokuba simahla kwaye nemithwalo iziswe kuwe.
Ukuba isampulu kufuneka iphuhliswe ngokusekwe kuyilo lwakho njl.njl, siya kujonga iindleko zezinto njl. Ukuba imathiriyeli ikhethekile kwaye ihlawuliswe kakhulu, kule meko, siza kuxoxa kunye nawe ukuze ubone indlela yokuhlawula iifizi zesampulu zingcono.
Leliphi ixesha lokuhola lesampulu?
Ngokwesiqhelo iintsuku ezi-7-10 ngokuxhomekeke kwisitayile obeka kuso.
Wenza ntoni ukulawula umgangatho wolunye uhlobo lweebhegi (Isampulu / Imveliso eninzi)?
a) Isampulu: * ukujonga okunzulu kwiphepha lephepha; * Ukukhangela ilaphu kunye nokucheba ukuze kulingane uyilo; * ukuvavanya iindlela zokuthunga; * kuvavanya isampulu yokugqibela neqela ukubona ukuba ikhona enye into ekufuneka iphuculwe ngaphambi kokuthumela kubathengi.
* Ukulungiswa komgangatho wovavanyo kungekuphela ekusebenzeni kweengxowa kodwa nokusebenza kohlalutyo lweekhemikhali ngokusekwe kwiimarike zabathengi bethu, ukwazisa abathengi bethu ngokuvunywa kwabo kokugqibela
b) Kwiiodolo zemveliso ngobuninzi: ngokusekwe ekusebenzeni kwinqanaba lesampulu, zonke iinkcukacha kunye nemibuzo zihlala zihlawulwa ngabathengi nakuthi. Siza kulandela isicwangciso semveliso ukuqinisekisa ukuba imveliso yesambuku yenziwe ngexesha! Ngexesha lokuvelisa, ukuba kukho nasiphi na isehlo, siya kwazisa abathengi bethu kwangaphambili ukuqinisekisa ukuba banexesha lokuqinisekisa okanye lokulungisa ingxaki kwangoko.
Ngaba unayo ikhathalogu yokubonelela ngexesha ngalinye?
Ewe, sinaye umyili wethu, siyila kwaye siphuhlisa iintlobo ezahlukeneyo zeengxowa ngexesha ngalinye lokuhlangabezana nefashoni.
ICatalogue nganye kwisiqingatha sonyaka kunye neengxowa ezahlukeneyo ngaphakathi! pls uqhakamshelane nathi ukuba ufuna i-e-catelogue.
Unokwenza njani ukuba andikwazi ukufikelela kwi-MOQ yakho?
Sineendlela ezahlukeneyo zokucebisa ngereferensi yakho. Siyathemba ukuba nayiphi na eyenzekayo inokuba yindlela ocinga ukuba luncedo ngayo ukuya kwiodolo. Umzekelo: Ngokwesiqhelo isizathu awungekhe uhlangane ne-MOQ yethu uyilo lwakho kodwa awunakufikelela kwi-MOQ kuthi ukuba sibhukishe ilaphu kunye nezinto ezinqunqwayo njl.njl. ukuba kunokwenzeka ukudibana nawe kakuhle.OR, ukuba ubungakanani bakho ngamaqhekeza nje ama-30-50pcs, siya kuphakamisa istokhwe sethu, esikwanomgangatho olungileyo kodwa ixabiso elifanelekileyo, imbonakalo yefashoni ngexesha ngalinye. Siya kuba nomphathi wethu oqeqeshiweyo ukuxoxa ngohlobo lwemibuzo kunye nawe kamva ukuba ufumana i-imeyile yakho.
Ngaba wena logo ngentando?
Ewe, unyaka nonyaka sihlakulela uhlobo olwahlukileyo lweebhegi zabaxumi.abaninzi banokukhetha uyilo lwebhegi yethu kodwa balwenza ukuba uphawu lwazo lube lushishino oluhlala lusebenza kuthi.
Loluphi uhlobo ngokwemiqathango intlawulo wamkela?
Idiphozithi T / T. D / P D / A UKUHLAWULWA KWOMBUTHO WOMBUTHO WENTSHONA.
Yintoni iwaranti yakho yeemveliso?
Sineenkqubo ezingqongqo zolawulo lomgangatho, kwaye sinobuchwephesha bokugcina ukunxibelelana nawe, ukuqokelela amanani akho emva kokuthengisa, kule meko sinokuqonda ngcono ngakumbi ukuba zeziphi iinkalo esomeleleyo kwaye sikhuphisana nazo kwintengiso, kwaye leliphi icandelo esisafuna phucula. Siza kujongana nayo nayiphi na ingxaki nasemva kwentengiso xa unxibelelana nathi, AKUKHO BUNGOZI EMVA KOKUthengiswa.